Xundubey oo beeniyay weerarrada ay dowladdu qaadday | KEYDMEDIA ONLINE
8 May 2021 Waa kuma Ergeyga dhex-dhexaadinaya khilaafka Soomaaliya?
8 May 2021 Soo-celinta xiriirka Kenya saameyn maku yeelan karaa Kiiska Badda?
7 May 2021 Madaxda Booliska oo booqday Madaxweyne hore
7 May 2021 Qoorqoor oo la kulmay ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya
7 May 2021 RW Rooble oo gaaray Boqortooyada Sacuudi Carabiya
7 May 2021 Aabbe 5 caruur ah ee uu dhalay maanta soo aasay
7 May 2021 Jaamacadda Carabta oo ka hadashay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya
7 May 2021 Muddo kordhintii Farmaajo maxaan ka baranay?
7 May 2021 Ciidankii Badbaado Qaran oo ka baxay Muqdisho
7 May 2021 Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamanka oo geeriyooday
7 May 2021 RW Rooble oo maanta ku wajahan Boqortooyada Sacuudi Caribiya
7 May 2021 Itoobiya iyo DP World oo kala saxiixday heshiis ku saabsan wadada Berbera
7 May 2021 Maxay ka wada hadleen RW Rooble iyo Safiirka dalka Turkiga?
7 May 2021 CC Warsame: Waa in la xaddido awoodahada hay’adaha Dawladda
7 May 2021 Amiirka Qatar oo qadka Taleefonka kula hadlay Farmaajo iyo Uhuru
6 May 2021 Ciidanka Badbaado Qaran oo laga saarey difaacyadooda
6 May 2021 Fariin ka timid Amiir Qatar oo la gaarsiiyay Uhuru
6 May 2021 Yaa ka dambeeya soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya?
6 May 2021 Soomaaliya oo dib usoo celisay xiriirkii diblumaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya
6 May 2021 Dalalka G7 oo fariin goodis ah u diray Soomaaliya
Xundubey oo beeniyay weerarrada ay dowladdu qaadday
Wasiirka amniga xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Xasan Xundubey oo shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa, islamarkaana u yeeray warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa beeniyay in ay dowladdu weerartay hoyga madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiir amniga xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Xundubey oo caawa muuqaal kasoo duubay gurigiisa ayaa beeniyay weerarkii galabtay lagu qaaday hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Xundubey oo ka jawaabayay qoraal kooban ee uu ku soo qoray bartiisa Twitter -ka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyay in ciidamada dowladdu weerareen, waxa uuna sheegay in ciidamada madaxtooyada Soomaaliya ay ilaalo gaar ah u yihiin maadaama uu yahay madaxweynahe hore ayuu yiri Xundubey.
Hadalka Wasiirka ayaa u muuqda mid aan xaqiiq ahayn, balse u eg is difaacid oo kaliya, waxaana muuqaallo laga soo duubay goobta uu dagaalku ka dhacay lagu arkayay ciidamada dowladda ee weerarka soo qaaday, iyadoo markii dambe lagala wareegay fariisimihii ay ku lahaayeen agagaarka hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee Mirinaayo.
Wasiirka Amniga xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Xundubey ayaa intii uu hadlayay waxaa socday weerar labaad oo ciidamada dowladdu ku qaadeen guriga hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, mana uusan soo hadal qaadin, taasina waxay muujineysaa weerarrada oo ah kuwa qorsheysan.
Taliyaha hada'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in uu leeyahay qorshaha weerarka lagu qaaday hoggaamiye CC Warsame ee caawa iyo sidoo kale kii lagu qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Waa kuma Ergeyga dhex-dhexaadinaya khilaafka Soomaaliya?
Warar 8 May 2021 6:06
Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Madaxweynihii hore ee Ghana uu dhex-dhexaadinayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan.
Soo-celinta xiriirka Kenya saameyn maku yeelan karaa Kiiska Badda?
Warar 8 May 2021 5:39
Madaxda Booliska oo booqday Madaxweyne hore
Warar 7 May 2021 22:01
Qoorqoor oo la kulmay ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya
Warar 7 May 2021 20:50
Soomaaliya oo soo wajahday dhibaato cusub - Warbixin
Warar 6 May 2021 9:42
Dhowrkii sano ee ugu dambeeyay, dad lagu qiyaasay 2.6 million oo baaralay u badan ayaa kasoo barakacay degaanadooda ku yaalla labada gobolka ee caanka ku ah Beeraha [Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe].
Maxaan ka naqaan Taliyayaasha diiday muddo kordhinta?
Dagaal ka socda Muqdisho
Deeq bixiyeyaasha oo diiday muddo-kordhinta Farmaajo - Warbixin
Taaliye Saadaq John oo is hortaagay fadhigii Baarlamanka